Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » COVID-19 wuxuu dilaa safarka ganacsiga Mareykanka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
In kasta oo kor loo qaaday safarka firaaqada xagaaga, sahankan cusub wuxuu iftiiminayaa aragtida mugdiga ah ee safarka ganacsiga iyo dhacdooyinka, kuwaas oo ka badan kala bar dakhliga hudheelka oo aan la filayn inay ku laabtaan heerarkii hore ee faafa ilaa 2024.
67% dadka socotada ganacsi ee Mareykanka ah ayaa qorsheynaya inay qaataan safarro yar.
52% socdaalayaasha ganacsiga ee Mareykanka waxay u badan tahay inay baajiyaan qorshayaasha socdaalka ee jira iyagoo aan dib u dhigin.
60% socotada ganacsiga Mareykanka ayaa qorsheynaya inay dib u dhigaan qorshayaasha socdaalka ee jira.
Socotada meheradaha ee Mareykanka ayaa dib u riixaya qorshayaasha safarka iyada oo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19, iyadoo 67% ay qorsheynayaan inay qaataan safarro ka yar, 52% ay u badan tahay inay baajiso qorshayaasha socdaalka ee jira iyada oo aan dib loo dhigin, iyo 60% oo qorsheynaya inay dib u dhigaan qorshayaasha safarka ee jira, sida laga soo xigtay qaran cusub sahan lagu sameeyay magaca American Hotel & Lodging Association (AHLA).
In kasta oo kor loo qaaday safarka firaaqada xagaaga, sahankan cusubi wuxuu iftiiminayaa rajada liidata safarka ganacsiga iyo dhacdooyinka, kuwaas oo ka badan kala bar dakhliga hoteelka oo aan la filayn inay ku soo laabtaan heerarkii cudurka faafa ka hor ilaa 2024.
La'aanta safarka ganacsiga iyo dhacdooyinku waxay leeyihiin raadad waaweyn oo ku aaddan shaqaalaynta tooska ah ee hudheellada hudheelka, iyo bulshada ballaadhanba. Huteelada ayaa la filayaa inay soo afjaraan 2021 ku dhawaad ​​500,000 oo shaqo marka la barbardhigo 2019. 10kii qof ee si toos ah uga shaqaysta hantida hudheelka, hudheeladu waxay taageeraan 26 shaqo oo dheeraad ah oo bulshada dhexdeeda ah, laga bilaabo maqaayadaha iyo tafaariiqda ilaa shirkadaha bixiya hoteelka - taasoo la micno ah ku dhawaad ​​1.3 milyan oo dheeraad ah shaqooyinka hoteelka taageera ayaa iyana halis ku jira.
Sahaminta 2,200 qof oo qaangaar ah ayaa la qabtay Ogosto 11-12, 2021. Kuwaas, 414 qof, ama 18% jawaabeyaasha, waa socdaalayaal ganacsi-yacni, kuwa ka shaqeeya shaqo caadi ahaan ka mid ah safar shaqo la xiriira ama filaya si aad ugu safarto ganacsi ugu yaraan hal mar inta u dhaxaysa hadda iyo dhammaadka sannadka. Natiijooyinka muhiimka ah ee socdaalayaasha ganacsiga waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
67% waxay u badan tahay inay qaataan safarada yar, halka 68% ay u badan tahay inay safraan gaagaaban
52% ayaa sheegaya inay u badan tahay inay baajiyaan qorshayaasha socdaalka ee jira iyada oo aan la haynin qorshe dib loogu dhigo
60% waxay u badan tahay inay dib u dhigaan qorshayaasha socdaalka ee jira ilaa taariikh dambe
66% waxay u badan tahay inay u safraan oo kaliya meelaha ay u wadi karaan